कांग्रेसमा महाधिवेशनको रन्को, युवा पुस्ताको आँटै छैन ! - नेपालबहस
कांग्रेसमा महाधिवेशनको रन्को, युवा पुस्ताको आँटै छैन !
१५ साउन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आसन्न चौधौं महाधिवेशनले कस्तो नेतृत्व देला भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । देशकै सबैभन्दा जेठो पार्टी कांग्रेस अहिले संसद्मा खुम्चिएको अवस्थामा रहेपनि यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शाख भने उँचो रहेको छ ।
त्यसैले कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका बारेमा धेरैले चासो र जिज्ञाशा राख्नु स्वभाविक भएको ठान्छन् राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य । उनी भन्छन्– नेपाली कांग्रेसले अब कस्तो नेतृत्व स्थापना गर्छ, त्यसैले उसको भविष्य पनि निर्धारण हुनेछ । नेपाली राजनीतिमा कांग्रेसप्रति धेरैको भरोशा र अपेक्षा रहेकाले पनि पार्टी नेतृत्वबारे चासो राखिनु स्वभाविक भएको उनी ठान्छन् । अब हुने महाधिवेशनले पुरानै पुस्तालाई नेतृत्वमा दोह¥याउने की नयाँमा पुस्तान्तरण गर्छ, त्यसैमा धेरै निर्भर हुने छ– विश्लेषक आचार्य भन्छन् ।
पुरानो पुस्ता नै पार्टीमा हावी भएकाले अहिले नै नयाँ पुस्ताले नेतृत्व पाइहाल्नेमा भने उनी आफैं सन्देह राख्छन् । शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेलमा अझै नेतृत्व गर्ने जीजिविषा कायमै रहेकाले नयाँ पुस्ताका नेताहरु अग्रसर होलान् भन्ने लाग्दैन – उनको ठहर छ । यद्यपि अब भने कांग्रेसले नयाँ सोच र अवधारणाका साथ जनताका बीच जानैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने आइसकेको आचार्यको ठम्याई छ ।
देउवा र पौडेलले गर्ने नेतृत्व पुरातनवादी र सतही मात्रै हुने भएकाले नयाँ सोच र अवधारणाका साथ युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्ने चमत्कारिक नेतृत्व आजको आवश्यकता बनेको छ भन्दै विश्लेषक आचार्यले तर नेपाली कांग्रेसका युवा पुस्तामा त्यो आँट र साहस भएको नेता भने आफूले नदेखेको बताए ।
गगन थापाले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको हल्ला भइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै यदि साँच्चै हो भने उनी कुनै गुटको दायराबाट बाहिर निस्कन सक्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ । तर मलाई लाग्दैन, गगनमा त्यो साहस र आँट छ– उनी भन्छन् । तर अब नेपाली कांग्रेसपनि युग र समयानुकुल भएर जनसमक्ष आएन भने असान्दर्भिक हुनसक्ने पनि उनले औंल्याएका छन् । अर्कातिर, युवा पस्ता पनि विभिन्न गुट उपगुटमा विभक्त भएकाले सामुहिक निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा देखिंदैन । यद्यपि कांग्रेसलाई शुद्धिकरण गर्नका लागिपनि युवा पुस्ताकै नेतृत्व आवश्यक रहेको ठम्याई उनीहरुको रहेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका युवा नेता गुरुराज घिमिरे भन्छन्– पुरानो पुस्ताले अब अभिभावकको भूमिका खेल्दा राम्रो । तर हामी युवाहरु चाहिं एकताबद्ध ढंगले अगाडि आउन सक्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसजस्तो जीवन्त र प्रजातान्त्रिक संस्कार बोकेको पार्टीमा गुट हुनु स्वभाविक भएपनि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सवालमा भने युवा पुस्ताको एकता जरुरी रहेको धारणा घिमिरेको छ ।
कुनै विषयमा अलग दृष्टिकोण हुन सक्ला तर नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्ने सवालमा भने एकरुपता हुनु नै उचित हुने उनको बुझाई छ । यसका लागि हामी आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरिरहेका छौं, सायद परिणाम राम्रै आउला– युवा नेता घिमिरेको भनाई छ ।
अर्का युवा नेता धनराज गुरुङ पनि अहिले कांग्रेसलाई नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको ठान्छन् । युवा पुस्ताले नै नेतृत्व थाम्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ । तर यसका लागि युवाहरुबीच सल्लाह र सम्वाद भने आवश्यक रहेको उनको बुझाई रहेको छ । आफूखुशी कसैले म सभापति वा अरु कुनै उमेदवार भएको घोषणा गर्नुपूर्व युवाहरु एकैथलोमा बसेर सामुहिक धारणा बनाउन अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । साझा अवधारणाका साथ अगाडि बढियो भने युवा पुस्तालाई कार्यकर्ताले अनुमोदन गर्ने उनको विश्वास रहेको छ ।
तर विश्लेषक आचार्य भने कांग्रेसको युवा पुस्तामा त्यो त्याग र बलिदानको भावना विकसित भइसकेको छैन भन्दै अहिलेसम्म पुरानै पुस्ताको पछाडि लागेर मात्रै आफूलाई सुरक्षित ठान्ने प्रवृत्ति कायमै रहेकाले तत्कालै नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण भइहाल्ला भन्ने आफूलाई नलागेको उनी बताउँछन् । बरु दोस्रो पुस्ताका नेताहरु नै अहिलेको विकल्प हुन सक्ने उनको ठम्याई रहेको छ । यसका लागि डा. शेखर कोइराला वा डा. शशांक कोइराला अगाडि बढेकामा त्यसैलाई एकपटक स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै कांग्रेसमा नयाँ सोच र अवधारणाले ठाउँ पाउन सक्ने उनी बताउँछन् ।
कोइराला वा प्रकाशमान सिंह वा विमलेन्द्र निधिले सभापतिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि धेरै परिवर्तनको सन्देश जान सक्ने सम्भावना रहेको उनले औंल्याए । तर बुढो पुस्ताले अबको कांग्रेस हाँक्न भने सहज नभएको उनी बताउँछन् । युवा पुस्ताले दोस्रो पुस्ताको फेर समाएर निर्णायक तहमा बस्ने अवस्था आयो भने त्यसपछिको कांग्रेस भने कसिलो र छुरा जस्तो तेजिलो हुने उनी बताउँछन् । त्यसका लागि युवा पुस्ताले नै आफूलाई खार्न सक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
Previous articleदेशैभर बदली : २४ घण्टामा ११ को मृत्यु, १२ जना घाइते
Next articleस्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएपछि कोशी अस्पतालको ओपीडी सेवा बन्द